Kwamuri Kuwana Fado Music in Lisbon | A Couple for the Road
Fado mumhanzi, rwiyo rwomumhanzi rwePortua, rwunoshuva zvikuru uye rune tsitsi rwemhanzi mimhanzi yerudzi runogona kuteverwa kumashure e1820s (uye zvichida yapfuura) muLisbon. Fado aiva nenzira dzakawanda kutaura uko vanhu vakadzvinyirirwa vakataurira manzwiro ekugumburwa, kusurukirwa, nekusiya zvachose panguva ye1960s uye 70s, sezvo vose vePortugal vakawira mukati muhuori hwezvematongerwe enyika - pakupedzisira vachigadzira nzira yekutonga kwe1974 inozivikanwa se " Carnation Revolution ".
Akabatanidzwa "Lisbon Blues"Nevamwe, Fado, uye yakagara iri rwiyo rwechisuru, chekutanga, uye rakaputsika. Nhasi inomiririra sechiratidzo chekare kupfuura chiratidzo chemazuva ano, sezvo makore makumi mana apfuura ave ane mutsa zvikuru kuLisbon, uye zvechokwadi yose yePortugal. Asi, kunzwisisa Fado ichiri kunzwisiswa neRisbon, ichiita chimwe chezvinhu zvinokosha kuti uwane muguta.
Iwe unofunga kuti nekududzirwa kwaFado pakati peLisboans kuti chimiro ichi chemimhanzi chichange chakajeka uye chiri nyore kuwana kamwe kana uri muguta. Muzvokwadi, zvisinei, hazvisi. Lisbon iguta re-alle-alleys, makomo, kukwirira kwekukwirira, uye zvimwe zvisiri-izvo-pachena-zvivako izvo zvakakwana zvigadzirwa, asi zvine inenge yehupamhi hwepamusoro mukutambudzika kwekuzviwana.
Mushure mokunge tatsvaga nekubvunza mibvunzo yevagari vemo, zvisinei, takakwanisa kuwana nzvimbo shomanana dzekutsvaga kuti tiwane imwe yeFado yakanakisisa muLisbon. Iye zvino, tiri kukubvumira pane zvakavanzika - nzvimbo dzakanakisisa dzekuwana Fado mimhanzi muLisbon, uye unofara zvikuru upenyu hweusiku muLisbon!
Mufananidzo neJennifer Woodard
Kana pane imwe hurukuro inowanikwa nevakawanda vezvivako izvi apo Fado inogona kuwanikwa, ndizvo zvavari kwete iri pakati peLisbon. Zvechokwadi, nzvimbo yakanakisisa inogona kuwana Fado muLisbon iri kumaodzanyemba kwePaza Marques dePombal, muganhu wekumaodzanyemba weBairro Alto.
Tasca Chico ndiyo imwe nzvimbo inonyanya kuzivikanwa muBairro Alto kuwana Fado, iyo inoitika musi weMuvhuro neChitatu kutanga pa 21: 00 (9: 00 pm). Iwe unoda kuuya kusvika pakutanga, seyayo duku, nzvimbo yakakurumbira iyo inowanzoitwa nevanhu vekwavo uye vatashanisi zvakafanana.
Tsamba: R. do Diário de Notícias 39, 1200-108 Lisboa, Portugal
Imwe nzvimbo yakanaka yekudyira muimba yepamusoro yeimba yezana remakore re 17th, Cafe Luso i great culinary uye Fado mimhanzi yakagadzirwa mu 1937. Yaiva nzvimbo yezvinyorwa zvakanyorwa naFado munyori Amália Rodrigues mu1955, uye anotakura nayo imwe yezvinyorwa zvakasiyana chaizvo seinofanira-kuona Fado nzvimbo.
Kupera kwepamusoro kwakasarudzwa kupfuura mamwe e "club-type" mahara umo Fado inogona kuwanikwa, kuchengetedza kunowanzodiwa, izvo zvinogona kuitwa via webhusaiti yavo.
Kero: Tv. da Queimada 10, 1200-365 Lisboa, Portugal
ChiPutukezi chikabika kubika uye inzwi raFado mumhepo yakasununguka uye yakawanda-ndizvo zvakaitwa naClube de Fado. Iyi sangano iri kunze kweChirsez da Se inokupa zvose zvaunoda muFado club pasina kubvisa chikwama chako kana kukupa manzwiro e "stuffiness".
Zviri mumasangano akaita seClube de Fado, nyore, rima, uye kushambidzika, uko kunaya kwechokwadi kweFado kunowanikwa mune imwe nzvimbo yepedyo.
Tsamba: 1100-009 Lisbon, Portugal
Inzvimbo mbiri chete kubva kuTagca do Chico muBairro Alto, A Severa inzvimbo huru yechipiri panzvimbo iyo iwe uri kutsvaga "rwendo" rwechokwadi rweFado kumaodzanyemba kweLisbon.
Pane imwe nzvimbo yepamusoro pane kutaura, zvichida Clube de Fado, A Severa yakasvinudzwa kubvira 1955 uye anoita inoda kubhadhara kupinda. Zvakakosha, zvisinei, sezvavakagara vachipa zvimwe zvekunyanya kudanana kweFado maitiro nevamwe vevanyori vanozivikanwa zvikuru muLisbon.
Tsamba: R. das Gáveas 51, 1200-206 Lisboa, Portugal
Nzvimbo yakakwirira yekupedzisira munzvimbo yeAlfama, iwe unowana zvechokwadi chaunobhadhara paTasca Bela. Kazhinji kune mari yakareruka yezvokudya, zvinwiwa, uye kurarama Fado, iyo yakagadzirirwa mumatunhu akanaka ari kumabvazuva kwakadziva Lisbon. Tsika yaBela ine imwe yezvinyorwa zvinonyanya kunaka pakati pekuita kwepamusoro kwekubatira kunze kwe "fussiness" yechiitiko chairo.
Tsamba: 1100 445, R. dos Remédios 190, Lisboa, Portugal
Kutanga mu 1937, Adega Machado ndeimwe yemakore akareba-ari kutamba Fado makambani muLisbon - asi zvinopfuura izvozvo. Kana pfungwa yako yekutanga iri kuve nechepamusoro-yepamusoro yekugadzirira chiPutukezi zvekare uye yechipiri pamimhanzi, Adega Machado inowedzera kukurumidza.
Kunyange zvazvo Fado yakakura, i Zvokudya hazvirevi.
Nheyo: Rua do Norte, nº 91, 1200-284 Lisboa, Portugal
Vamwe vangareva kuti A Nini ndiko chaiye Fado upenyu.
Kwete frills, hakuna fluff, inongova yakagadzikana uye yakagadzikana bha ine zvokudya zvakakura, mitengo inodhura, uye imwe yepamusoro Fado tsika kupi zvako. Ndiyo nzvimbo yakanaka uye yakanakisisa yekuratidza rudo rwemasikati manheru kune vakaroorana muLisbon, iyo inowanzowedzera nyeredzi Fado nhoroondo Maria Da Nazaré naCeleste Rodrigues.
Tsamba: R. Dom Francisco Manuel de Melo 44A, 1070-015 Lisboa, Portugal
Uyewo muBairro Alto munharaunda ndeye Retiro dos Sentidos, rimwewo ruduku rukuru rune rudo rune fado mimhanzi inenge usiku. Kunyange zvazvo chikafu chisina kuenderana nezvimwe zvivako zvisati zvataurwa, iyi nzvimbo yakakura, duku kudhakwa zvishomanana uye mimhanzi yakakura. Tapa mahwendefa avo ndezvokudya zvakavimbika zvikuru, asi iwe unoda kutakura mari sevashandi vagara vachinyunyuta pamusoro-kubata-uye-kuenda wifi izvo zvinowedzera kukwanisa kwavo kugadzira makadhi.
Pasinei neizvi, kana uri kutsvaga nzvimbo yakakodzera, uwane ma euro mashomanana muhomwe yako uye chaizvoizvo unoda kunzwa Fado uye unonakidzwa nedoro, Retiro dos Sentidos inzvimbo inofadza.
Tsamba: A, R. do Diário de Notícias 40, 1200-144 Lisboa, Portugal
Mufananidzo naJimmy Baikovicius
Zvakakura, zvinonakidza, zvakanaka, asi zvakare chakanakisisa.
Casa de Linhares haisi iyo yakasununguka-iyo mamiriro ezvinhu angave ari kutsvaga, apo iwe unotapira mudyari muusiku weLisboan hunopisa, asi pane chipfeko-ku-kunakidza chinhu chinogara muLinhares House - chimiro chezvasara zve a Chivakwa chekare iyo yakagumburwa mukudengenyeka kwenyika kwe1755.
Fado inofarirwa zvechokwadi pano, uye iyo mitengo haisi yepamusoro sezvinogona kutarisirwa (Lisbon imwe yezvakanakisa mumaguta muguta rose reEurope) pamwe nenguva yezvinhu zvekugadzira zvinhu zvinenge zvichikomberedza $ 40 USD.
Casa de Linhares is of the yakanakisisa zuva usiku manheru kuLisbon, uye chimwe chezvinhu zvinonakidza zvikuru zvekudya kukuru uye Fado.
Dhiyabhorosi: Beco dos Armazéns do Linho 2, 1100-037 Lisboa, Portugal
Kubva 1975, Senhor Vinho ave a nzvimbo yakakurumbira yaFado uye kukuru Lisboan culinary classic iyo inozivikanwa nevashanyi uye vagari vemo. Imwe nzvimbo yezvokudya zvinoshamisa, Senhor Vinho kazhinji inoshandisa mufananidzo waFado anozivikanwa zvikuru, kusanganisira Aldina Duarte, Vanessa Alvez, uye Filipa Cardos.
Tsamba: R. Meio kuLapa 18, 1200-724 Lisboa, Portugal
Vhivha chinyorwa ne Chris
Category: Arts & Music, Vakaroorana Kufamba, Europe, Putugaro, Reviews, Travel Planning Tags: adega machada, casa de linhares, clube de fado, culinary, fado, Lisbon, mumhanzi, Putugaro, tasca do chico, rwendo rworongwa
← Maitiro Ekuita Kufamba Kwakareruka
Zvinhu Zvinonakidza Kuita MuChiang Mai →